MRB otomatiki vanhu vanopikisa sensor HPC005S (yakananga-kurodha vhezheni) Kusiyana neiyo HPC005, HPC005S otomatiki vanhu kaunda inogona kuendesa data kune gore isina iyo PC. Iyi isina waya otomatiki vanhu kaunda iyo inogona kutapurirana isina WIFI, Vazhinji vedu otomatiki vanhu kaunda zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaurirana nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve edu otomatiki vanhu kaunda. In ...
Iyi iri nyore nyore yekupikisa musuwo inofambiswa nebhatiri chete. Mazhinji emakamuri edu ekuverenga zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Iwe unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vatumire iwe rumwe ruzivo rwakadzama nezve edu emadhivhesiti emakona. Huwandu hwevapfuuri kuyerera parizvino ndiye mukuru mutungamiri mumusika. Pasi pesimba renzvimbo yenzvimbo, nharaunda, traffic uye zvimwe zvinhu, kuongororwa uye huwandu hwehuwandu hwepasseng ...